Momba ny Ota Ward Hall Aplico Construction mihidy | Fikambanana fampiroboroboana ny kolontsaina Ota Ward
Momba ny Ota Ward Hall Aplico Construction Nakatona
Mba hiantohana ny fiarovana ny mpampiasa rehetra, Ota Ward Hall Aplico dia hanao asa fanamboarana mba hanaovana ny valin-drihana amin'ny efitrano lehibe, efitrano kely ary efitrano malalaky ny efitrano malalaky ny efitrano fampirantiana.Mandritra izany fotoana izany dia hanao asa fanavaozana izahay mba hanitarana ny androm-piainan'io fotodrafitrasa io.
Noho io antony io dia hikatona mandritra ny 2022 taona sy 1 volana eo ho eo ny tranombakoka manomboka ny Janoary 2023 ka hatramin'ny 2 febroary 1 (voalahatra).Ankasitrahanay ny fahatakaranareo sy ny fiaraha-miasa.
Fampandrenesana ny Ota Ward Hall Aplico mihidy (XNUMX Janoary, faha-XNUMX taonan'ny Reiwa)
Janoary 2022 hatramin'ny Febroary 1 (nomanina)
Fotoana misy sy fe-potoana mihidy
Ny serivisy dia kasaina hanomboka amin'ny volana martsa 2023 aorian'ny fahavitan'ny fanamboarana.
Momba ny birao mandritra ny fotoana nikatona
Ny varotra tapakila ho an'ny fampisehoana ary ny fandraisana amin'ny fampiasana hofana aorian'ny fanidiana dia hotanterahina toy ny mahazatra.
Manodidina ny 10,991㎡ (velarana manontolo)
Rafitra SRC Fizarana S ampahany
Rihana 5 ambonin'ny tany, rihana 1 ambanin'ny tany
Efitra lehibe (seza 1,477)
Efitra kely (seza 175)
Efitra fampirantiana (seza 400 eo ho eo)
Studio AB, efitrano fisoloana akanjo
Makoto Okada, Lehiben'ny fifandraisana sy ny fandrindrana amin'ny fananganana
Lehiben'ny governemanta Satomi Koike